I-Telegram igxeka i-Apple ngokuzimela phambi kwe-European Union | IPhone iindaba
Ipesenti egcinwa yiApple kuzo zonke izinto ezithengiweyo kwiVenkile yeApple, iya isiba yingxaki enkulu kwinkampani kaTim Cook. Kodwa hayi ngenxa yepesenti kuphela, kodwa nangenxa yokuba kuphela kwendlela yokunikezela usetyenziso kweliqonga.
Inkampani yokugqibela ehambise ifayile kwaye ifake isimangalo ngokuchasene neApple kwi-European Union ngokubhekisele kwimigaqo-nkqubo yayo yiTelegram, isicelo semiyalezo esingaphezulu kwezigidi ezingama-400 zabasebenzisi abasebenza rhoqo ngenyanga kwaye yongeza kuleyo ibibonisiwe ngaphambili Spotify y Rakuten.
Ngokwe-Times yezeMali, oye wakwazi ukufikelela kwityala elifakwe yiTelegram, iyangqina ukuba iApple kufuneka ivumele abasebenzisi banethuba lokukhuphela isoftware ngaphandle kweVenkile yeApple.
UGoogle akazange afakwe kwezi zityholo, kuba ngaphandle kokuba nenqanaba elifanayo ne-Apple, NGABA ivumela ukufaka usetyenziso kwezinye iivenkile zesicelo okanye oovimba abagcina izinto.
I-Financial Times ithi Isikhalazo seTelegram sivela ngo-2016, xa iApple yamthintela ekumiliseleni iqonga lokudlala kwiVenkile yeApple kuba yayicinga ukuba yaphula imithetho yevenkile yesicelo.
Itelegram yanyanzelwa ukuba ishiye umbono wokuthintela ukusetyenziswa kwayo ekususweni kwiVenkile ye App. Ukusuka kwiTelegram bayaqinisekisa ukuba lo ngumzekelo ocacileyo we Isakhono sika-Apple sokuthintela umbulelo omtsha kumandla akhe okuzimela kwimarike yeapp.
Elitsha ityala lokulwa ukungathembeki nxamnye neApple lizimele ngokupheleleyo kuphando olwenzeka eMelika, kodwa ukuba i-European Union inyanzela iApple ukuba ivumele ezinye iivenkile ukuba zifikelele kwiqonga layo, lo manyathelo anokusebenza kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » I-Telegram igxeka i-Apple ngokuzimela phambi kwe-European Union
UQualcomm walumkisa iiyure ngaphambi kokuqinisekiswa ngokusemthethweni